Umthandazo wokufumana umsebenzi Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
La Umthandazo wokufumana umsebenzi, Yenye yezona zifunwa kakhulu kwihlabathi liphela; Kuba ukufaka isicelo somsebenzi akukho lula njengoko kubonakala kwaye amaxesha ngamaxesha, ukongeza kulo lonke ulwazi onalo, kubalulekile ukuba ufumane uncedo oluqinisekisa ukuba uyawufumana loo msebenzi uphupha kakhulu ngawo. Ngesi sizathu, namhlanje sineli nqaku apho uya kufunda yonke into malunga nesihloko.
Owona mthandazo mhle kwishishini lakho.
1 Umthandazo wokufumana umsebenzi
2 Kulungile ntoni ukuthandazela ukufumana umsebenzi?
3 Iindidi zezivakalisi ezinxulumene nomsebenzi
3.1 Umthandazo wokufumana umsebenzi olungileyo
3.2 Umthandazo othile womsebenzi
Umthandazo, njengokuba usaziwa, yindlela apho umntu owenza isicelo kufuneka anike ingqwalaselo yakhe epheleleyo kwimisebenzi ayenzayo. Ngale ndlela isithethe sivela ngokholo oluninzi kwaye iziphumo ezinqwenelekayo zanda kude kube ekugqibeleni oko kufunwayo kufezekisiwe.
Ukongeza, yiyo yonke intetho yengqondo ayenzayo umntu, ngenjongo yokufumana isibonelelo; kule meko ayinakusetyenziselwa kuphela ukufumana umsebenzi; ikwasebenza ngokugqibeleleyo njengempembelelo yokugqibezela ishishini, ebelinako engqondweni okanye esele lisenziwa.
Kulungile ntoni ukuthandazela ukufumana umsebenzi?
Ngeli qhinga ikakhulu elinxulumene nenkolo, ziyafumaneka izibonelelo ezinkulu. Ngokucacileyo, eyokuqala kubo kukufumana loo msebenzi ubewufuna kakhulu; Nangona kunjalo, kubaluleke kakhulu ukuba ukongeza ekuthetheni lo mthandazo, unazo zonke izakhono, ulwazi kwaye, ngaphezu kwako konke, imeko yokwenza umsebenzi owabelweyo.
Enye yeendlela enokuthi isetyenziswe ngayo kukugcina imeko ngaphakathi emsebenzini, igcwele ukuvisisana kwaye ngaphezulu kwayo yonke into emnandi. Le ndawo kulapho sichitha ixesha elininzi lobomi bethu; kwaye ke, kufuneka siqinisekise ukuba abo sisebenza nabo ngabona babalaseleyo ukuze imisebenzi eyenziwa ngaphakathi kwinkampani ingenalo naluphi na uhlobo lwengxaki.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, ukusukela xa usenza isigqibo sokwenza lo mthandazo, kukuba uyazi ukuba isenzo esimele ukholo oluninzi kwinkolo, kufuneka senziwe ngako konke ukuzibophelela emhlabeni kwaye, ngokukholwa. yonke into onokuyiphumeza ngalo mthandazo. Akukho sizathu sokuphinda lo mthandazo amaxesha amaninzi, kodwa ngosuku olulandelayo ungakholelwa kwinto yokomoya.
Umthandazo unamandla, ukuba unikwe yonke into amandla kuyimfuneko ukuthobela isicelo somntu; Khumbula ukuba eyona nto ibaluleke kakhulu kulo mbandela kukuba umntu owenza isicelo ubonakalisa ukholo kunye nokhuseleko olukhulu kulo msebenzi wenziwayo. Eli linyathelo lokuqala nelona lifanelekileyo, okuseleyo kukulandela imigaqo esekwe kwisivakalisi ngasinye esinxulumene nomsebenzi.
Ukuba unomdla kolu lwazi sikushiya kulo nqaku, unganqikazi ukuqhubeka nokufunda idatha enomdla ngaphakathi kwiblogi yethu. Sicebisa ukuba undwendwele Umthandazo ka-Francis Onyulu wase Assisi,
Iindidi zezivakalisi ezinxulumene nomsebenzi
Njengoko kukhankanyiwe kwesinye seziqendu ezidlulileyo, lo mthandazo ungasetyenziselwa ukufumana izibonelelo ezininzi, ezivela kwiintsikelelo zomsebenzi wakho okanye kwindawo yokusebenzela, de bacele iinkonzo kwenye inkampani, umzekelo. Ukujongana nalo mbandela kancinci, nazi iindlela eziqhelekileyo zomthandazo zokufumana umsebenzi; kwaye siyathemba ukuba ziya kuba luncedo kakhulu:
Umthandazo wokufumana umsebenzi olungileyo
Maninzi amaxesha oxinzelelo xa ubhekisa kumba wezabasebenzi, nangayo yonke ingcinga esehlabathini. Umsebenzi uthetha wonke umzamo owenziwa ngumntu, kangangeeyure ezininzi (kuxhomekeke emsebenzini nakwilizwe elo), ngenjongo yokufumana umvuzo oqinisekileyo, obavumela ukuba baphile, bathenge ukutya, banxibe; Ngamafutshane, sisiseko soqoqosho kwaye siyimfuneko kakhulu emntwini.
Nangona kunjalo, awufanele uziva uphelelwe lithemba, nokuba ujongene nayiphi na imeko, uThixo uhlala ekulungele kwaye ekunceda ngalo lonke ixesha. Into ebalulekileyo kukuba imithandazo oza kuyenza, inokholo oluninzi; Khumbula ukuba unika ingqalelo enkulu kubantwana bakhe bonke emhlabeni, soze asishiye. Nantsi i-snippet:
Kulo mthandazo, akufuneki wenze kuphela izicelo zokufumana umsebenzi kwaye ngoku, umthandazo kufuneka uqale ngokuthathela ingqalelo zonke iimfuno ozihambisa ngalo mzuzu. Qinisekisa ukuba ngumsebenzi apho wena kunye nosapho okanye abantu abakungqongileyo banokuzuza nabo.
Kwakhona, isebenza ngokugqibeleleyo kwimeko apho isicelo asisiyakho, kodwa sisebenza nogxa wakho okanye umhlobo wakho. UThixo uhlala efuna ukubanika konke okulungileyo abantu abakudingayo kwanakwabo bangakufanelekelanga oko, uyabakhathalela bonke abantwana bakhe ukuba baphile kwaye abasindise ngeendlela ezahlukeneyo.
Umthandazo othile womsebenzi
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuzibeka egameni lenkosi yethu; khumbula ukuba ukholo luyakwazi ukuhambisa iintaba, yonke into ofuna ukuyifezekisa iya kufumaneka kuwe; ukuba nje ugcina uThixo ekhona kuqala. Usisikelela yonke imihla, usinika imbuyekezo amaxesha amaninzi akholelwa ukuba asifanelanga; Ngale nto kunye nokunye okuninzi, kubalulekile ukuba wenze umthandazo, uyakunceda uwafezekise onke amaphupha akho.
Ukongeza, kufuneka uwenzile lo msebenzi wexesha elizayo, ngokungathi ibisele ingowakho, yindlela uThixo ekubonisa ngayo ukuba ungomnye wabantwana abalungileyo kwaye ngenxa yazo zonke izenzo zakho, yonke imihla uyakusikelela. Qiniseka ukuba isicelo sijolisiwe ukuze lo msebenzi ube negalelo kuyo yonke imiba yezoqoqosho kwaye usebenze njengesiseko sokuxhasa usapho lwakho, ngaphezulu kwazo zonke izinto. Sikushiya nevidiyo apho unokufunda ngakumbi malunga nesihloko.